जनताका काम गर्न पटक-पटक अह्राएको नटेरेपछि मन्त्री यादबद्वारा सचिव झा कुटिए ! | suryakhabar.com
Home प्रदेश प्रदेश2जनताका काम गर्न पटक-पटक अह्राएको नटेरेपछि मन्त्री यादबद्वारा सचिव झा कुटिए !
जनताका काम गर्न पटक-पटक अह्राएको नटेरेपछि मन्त्री यादबद्वारा सचिव झा कुटिए !
on: ३० पुष २०७५, सोमबार ०७:३१ In: प्रदेश 2Tags: No Comments
धनुषा । प्रदेश नं २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवमाथि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई कुटपिट गरेको आरोप लागेको छ ।
मन्त्री यादवको नजीकको संस्था कार्यक्रमका लागि छनोटमा नपरेको हुँदा उहाँले आफूलाई कुटपिट गरेको आरोप सचिव झाले लगाए । सचिव झाले भन्नुभयो, “उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुन लागेको गरीबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा)का लागि गैरसरकारी संस्थालाई छनोट गर्नुपर्ने प्रारम्भिक सूचीमा मन्त्री यादव नजिकको संस्था नपरेकाले उहाँले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर मेरो गालामा झापड हान्नुभयो ।” सचिव झाले आफूले लगेको फाइल र डायरीसमेत मन्त्री यादबले खोसेको आरोप लगाए।
मन्त्री यादवले भने आफूले नकुटेको जिकिर गरेका छन् । उनले सचिव झा प्रदेशका सभामुख र अर्का एक जना मन्त्रीको अगाडि ‘आफू जनकपुरको लोकल हुँ’ भन्दै आफ्नो पदीय मर्यादा बिर्सिएर चर्को आवाजमा बोल्दै कोठाबाट निस्किएको बताए ।
मन्त्री यादवले सचिवलाई आफूले कुटेको प्रमाण भए आफू कारवाही भोग्न तयार रहेको बताए । घटनापछि सचिव झालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा एक घण्टा राखेर प्रहरीले बयान लिएको थियो । त्यसपछि उहाँलाई प्राथमिक उपचारका लागि जनकपुर अञ्चल अस्पताल पु¥याइएको थियो । घटनापछि सचिव झाले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आफू मन्त्रीविरुद्ध अब कानूनी कारवाहीतर्फ जाने चेतावनी दिए ।
जनताका पक्षमा काम गर्न पटक पटक आग्रह गरेपनि मन्त्रीको आग्रहलाई नमानेपछि सचिव झामाथी हातपात गरेको मन्त्री यादब निकटस्थ स्रोतले बतायो । मन्त्री यादबले भने आफूले कसैलाई पनि नकुटेको दाबी गरिसकेका छन् ।
Province Minister Yadav ‘misbehaves’ with Secretary
३० पुष २०७५, सोमबार ०७:३१